सत्य कथा | Saaurya
जुन आफ्नो ड्युटी गर्न भर्खर निस्केकी थिईन् । ताराहरु जुन माथि गिद्दे नजर लगाइरहेका थिए । दिन भरी घामको अर्धाङ्गिनी भएर घरमै बसेकी जुनलाई राती घाम डुल्न गएको मौका छोपेर ताराहरु गिज्याइरहेका थिए । तर पनि जुन भने उनीहरुको कुनै पर्बाह नगरी आफ्नी दिदी पृथ्वीलाई उज्यालो पारी रहेकी थिईन् ।
पृथ्वी त्यस दिन निराश थिईन । उनलाई कुन कुराले सताइरहेको थियो भन्ने कुरा कसैले नि बुझ्न सकेनन् । उनी दिनभरी आफै निथ्रुक्क हुने गरी रोएकी थिईन् । घामसँग टादै बसिन् । ज्वाईसँग सन्कोच मानेर होला ,सायद ।
म खाना खाएर बिस्तारामा पल्टी रहेको थिएँ । मेरो ल्याप्टपमा सुमधुर गीत बजिरहेको थियो,चन्द्रमा आकाशमा उदाउँदा लाग्छ तिमी झै …… । उनीहरु मेरो झ्यालबाट एक एक गर्दै भित्र पसे । ढोका बन्द थियो, त्यसैले होला । उनीहरुलाई मैले चिनेको थिईन । सबै नौला अनुहार थिए । उनीहरु भित्र पस्नुको कारण मैले थाहा पाइसकेको थिए ।उनीहरु मलाई चोट पु¥याउन आएका थिए । मैले उनीहरुको आँखामा आक्रोश देखेको थिएँ । आवाज सुन्दा लाग्दथ्यो उनीहरु काली माताका बहान हुन् । मसँग उनीहरुबिरुद्ध लड्न कुनै हतियार थिएन । म निशस्त्र थिएँ । तर मसँग हट्टा कट्टा हात खुट्टा थिए । यस्ता समूहहरु प्रत्येक दिन जसो आएर मलाई धम्काउने गर्थे । उनीहरुकै कारणले म सुत्न सक्दिनथेँ । त्यस दिन मैले केहि न केहि गर्नै पर्ने थियो । हरेक दिन म तेस्ता समुहसँग डराएरै बस्थेँ । त्यस दिन मैले आँट गर्नै पर्दथ्यो । हैन भने उनीहरुको मनोबल बद्न सक्दथ्यो र उनीहरु अझै ठूलो झुन्डमा मेरो कोठामा पस्न सक्थे ।
म जुरुक्क खाटबाट उठँे । सबै भन्दा भुस्तिग्रेले केहि नबोलि मेरो गालामा एक झापट हान्यो । उ नाच्न थाल्यो । अरु सबै खितितित्त हाँसे । म रीसले चूर भएँ र उसलाई सकी नसकी समातेर झ्यालबाट बाहिर फालिदिएँ । मेरो आत्माबल बद्यो ।अर्काे तर्पm भने आफ्नो टोली नेताको हालत देखेर सबै आत्तिए । तर पनि उनीहरु म माथि जाइ लगे । म पनि आफ्नो सामर्थले भ्याएसम्म लडी रहँे । उनीहरु कैले एक एक गर्दै लड्न आउँथे भने कहिले दुई तीन जाना मिलेर मलाई पिट्थे । उनीहरुसँग उड्न सक्ने शक्ती पनि थियो । मेरो शरीर रगत्ताम्मे बनेको थियो । तर पनि मैले उनीहरु माथि बिजय प्राप्त गरेँ । उनीहरु मेरो कोठाको कुना कुनामा ढलिरहेका थिए ।
त्यस रातको घटना एक कान दुई कान मैदान भएछ । सुनेको छु लाम्खुटे्हरु शोक मनाउँदै छन् रे । उनीहरुले भविष्यमा के गर्न सक्छन् भन्ने कुरा कसैलाई नि थाहा छैन ।
« Impact Of Western Culture In Nepal Going to China? Yes. Then know the Chinese Culture. »